Thenga iHydrafinil powder (1689-64-1) Umzimveliso & Abavelisi
IHydrafinil (9-Fluorenol) ipowder (1689-64-1)
IHydrafinil (9-Fluorenol) ipowder sisiphumo sotywala esivela kwi-fluorene. Kweyona isomer ebaluleke kakhulu, i-fluoren-9-ol okanye i-9-hydroxyfluorene, iqela le-hydroxy libekwe kwikhabhoni yokuqhawula phakathi kweendandatho ze-benzene ezimbini. IHydrafinil (9-Fluorenol) inokuguqulwa ibe yi-fluorenone yi-oxidation. Yikhrimu emhlophe yekrimu eqinileyo kubushushu begumbi.
I-Hydrafinil (9-Fluorenol) powder (1689-64-1) ividiyo
IHydrafinil (9-Fluorenol) Ulwazi oluSisiseko
igama IHydrafinil (9-Fluorenol) ipowder
Igama leKhemikhali hydrafinil;Hydranafil;9-FLUORENOL;fluoren-9-ol;Hydroxyfluoren;9h-fluoren-9-ol;Fluoren-9-ol 97%;9-HYDROXYFLUORENE;9-HYDROXY-FLUOREN;9-Fluorenol, 98+%
Iintetho ezifanayo I-9-Hydroxy fluorene
I-Molecular Formula C13H10O
Isisindo somzimba 182.22 g / mol
Indawo yokunyibilika 152-155 ° C
Kubonakala Ikristali emhlophe engaphandle-emhlophe
Ubomi obulicla 6 kwiiyure ze-8
Umzimba I-Chloroform (Kancinci), i-Methanol (Kancinci)
yoGcino Imeko Ifriji
isicelo Isetyenziswa kumayeza, kwimveliso yezempilo, ukutya, isiselo, izimonyo, izixhobo ze-biological kunye nemichiza kunye namanye amashishini.
IHydrafinil (9-Fluorenol) Inkcazo ngokubanzi
IHydrafinil (9-Fluorenol) ipowder sisiphumo sotywala esivela kwi-fluorene. Kweyona isomer ebaluleke kakhulu, i-fluoren-9-ol okanye i-9-hydroxyfluorene, iqela le-hydroxy libekwe kwikhabhoni yokuqhawula phakathi kweendandatho ze-benzene ezimbini. IHydroxy fluorene inokuguqulwa ibe yiHydrafinil (9-Fluorenol) nge-oxidation. Yikhrimu emhlophe yekrimu eqinileyo kubushushu begumbi.
IHydrafinil (9-Fluorenol) ipowder sisiphumo sotywala esivela kwi-fluorene kwaye iyaneliswa njengecandelo le-eugeroic, ekhuthaza ukuphaphama. Inkampani i-Cephalon iphande iHydrafinil (9-Fluorenol) ngokuthelekiswa ne-eugeroic drug modafinil. Kuphando lwabo lokuthelekisa kunye neentonga, baqaphela ukuba iHydrafinil (9-Fluorenol) isebenza kakuhle kakhulu kune-modafinil (ukuya kuthi ga kuma-39%). Nangona ine-dopamine ukuphinda iipropathi, zithambekele ekubeni buthathaka.
I-Hydrafinil (9-Fluorenol) Imbali yomgubo
I-Hydrafinil (i-9-Fluorenol) ipowder yimichiza yophando engalawulekiyo eyayisenziwa kuqala yiCephalon Pharmaceuticals (ngoku eyiTeva) njenge-eugeroic (iarhente yokukhuthaza ukuvuka). Emva kokudityaniswa kwayo, iHydrafinil (9-Fluorenol) yenye yearhente ezininzi ezinokuthi zithathelwe ingqalelo njengendlalifa ethandwayo neziyobisi ezivunyiweyo ze-FDA, Provigil (Modafinil). Idatha yokuthelekisa evela kuvavanyo lwezilwanyana ibonakalise ukuba iHydrafinil (9-Fluorenol) ibonise ~ 39% ukusebenza kwe-eugeroic enkulu kune-modafinil ngaphezulu kwexesha elifutshane (iiyure ezi-4).
Nangona kunjalo, ngenxa yezizathu ezingachazwanga, uCephalon waluphelisa uphuhliso lweHydrafinil (9-Fluorenol) njenge-eugeroic yenoveli. Endaweni yoko, bayalela iinzame kunye nezixhobo zokuphanda, ukuphuhlisa, kunye nokuthengisa i-armodafinil yeziyobisi. IArmodafinil (ithengiswe phantsi kwegama lophawu "Nuvigil") yayiza kwaziwa njengendlalifa esemthethweni yokulandela amayeza eProvigil, ishiya abaninzi bezibuza ukuba ingaba iHydrafinil (9-Fluorenol) inokuba luphuculo oluphezulu na.
Abanye bacacisa ukuba i-Hydrafinil (9-Fluorenol) yayisetyenziswa njengeyeza lokubulala izinambuzane ekupheleni kweminyaka yoo-1930, ityhefu eqinisekisiwe kwizilwanyana zasendle zasemanzini, kunye nokuphelelwa litye kweCephalon kusenokuba sisizathu esaneleyo sokuphelisa ukukhula kwayo. Ukusukela ngo-2015, i-Hydrafinil (9-Fluorenol) iphinde yafumana ukuthandwa phakathi kwabathandi be-nootropic kwaye ngoku ithengiswa njengezinto ezingalawulwayo kwi-intanethi phantsi kwegama elithi "Hydrafinil." Uninzi lwabantu abazilingelayo bayangqinisisa ukusebenza kwayo, kodwa abanye bayathandabuza kula mabango kwaye bayalumkisa malunga nephepha lawo elingabhalwanga, elinokuba yingozi kwicala lesiphumo.
IHydrafinil (9-Fluorenol) Indlela yokusebenza
Indlela yokusebenza enxulunyaniswa nehydrafinil ayicacanga ncam. Uninzi luthelekelela ukuba lusebenza njenge-5-HT6 receptor antagonist kunye neguptake reuptake inhibitor (DRI). Nokuba ezi zinto zichanekileyo zichanekile ziyaphikiswa kuba khange ziphandwe ngokusemthethweni ebantwini. Ngayiphi na imeko, i-hydrafinil inokuthi iqinise ukubekwa esweni kwengqondo kunye nokusebenza kwengqondo ikakhulu ngokunyusa ukuhanjiswa kwedopaminergic kunye nokuhanjiswa kwe-noradrenergic.
Isicelo se-Hydrafinil (9-Fluorenol)
I-9-Fluorenol ikwabizwa ngokuba yi-hydrafinil kwaye sisizukulwana esilandelayo sezinto ezikhuthazayo ezibonakalayo eziboniswe ukuba zingama-39% ngakumbi kune-modafinil ekugcineni ulwaziso. I-140% isebenza ngokufanelekileyo njenge-modafinil ekukhuthazeni ukuphaphama kwaye ayinakho ukusebenzisana okufanayo ne-modafinil. Ayisihlali ixesha elide, yenza ukuba kube lula ukuba idosi ibe ngcono, ngaphandle kokulinda iiyure ezili-12 zeziphumo
IHydrafinil (i-9-fluorenol) ayingomlutha
IHydrafinil (9-Fluorenol) yodidi lwamachiza abizwa ngokuba yi-Eugeroics. Ezi zizincedisi ezivelisa ukuvuseleleka kwengqondo okuhlala ixesha elide kukhokelela ekuvukeni. Umbono emva kokuveliswa kwala machiza kukhulisa ukuqaqamba ngaphandle kokufumana imiphumo yomzimba ophefumlelweyo okanye ngcono kodwa ukuxhatshazwa / ukunyamezelwa / ukulutha kwezivuselelo zesiko. Kwaye iHydrafinil (9-Fluorenol) ayifani.
Ukunyusa kukaHydrafinil kweendlela zedopamine kungaphantsi kakhulu kuneemodinin's Oko kuthetha ukuba kunokubakho umlutha.
IHydrafinil (9-fluorenol) ayisiyi-carcinogenic kwaye inetyhefu ebantwini
Esi siyobisi sisiselo esivela kwi-fluorine. Iqela layo le-hydroxyl libekwe phakathi kwamakhonkco alo amabini e-benzene ekhompyutheni ekhawulezayo. Inkqubo ye-Oxidation inokusetyenziselwa ukuguqula i-hydroxyfluorene kwi-fluorenone. Le khompawundi ayisiyo-carcinogenic kwaye ayisiyongozi ebantwini. Ke, uphando lwenziwa ziiChemicals ezisebenzela i-Cephalon (inkampani ye-bio-pharmaceutical), ngokucacileyo ukuba liza neyeza eliza kuphumelela iModafinil, ichiza elichasene ne-narcolepsy.
Ayisihlali ixesha elide, yenza ukuba kube lula ukuba idosi ibe ngcono, ngaphandle kokulinda iiyure ezili-12 zeziphumo. Inezona zinto zincinci zisezantsi ze-DAT kodwa zinamanyathelo aphezulu eugeroic. Inamandla ngakumbi kune-modafinil ene-50-100mg ehambelana ne-100-200mg yemodafinil. Ibonisa ukungabinayo ityhefu kwaye akukho kunxibelelana kwesibindi.
IHydrafinil (9-Fluorenol) Uphando ngakumbi
IHydrafinil (9-Fluorenol) inetyhefu kwizinto eziphilayo zasemanzini kubandakanya i-algae, ibacteria kunye necrustaceans. IHydrafinil (9-Fluorenol) yayinelungelo elilodwa lomenzi wayo njengesitshabalalisi sezinambuzane ngo-1939, kwaye ikwalulwelo oluchasene ne-algae eluhlaza iDunaliella bioculata.
Ubuthakathaka bayo kunye ne-carcinogenicity ebantwini ayaziwa.
Uphononongo olupapashwe ngoosokhemisti abasebenzela inkampani ye-biopharmaceutical inkampani uCephalon ukuphuhlisa umlandeli we-eugeroic modafinil uxele ukuba i-Hydrafinil (9-Fluorenol) ehambelana nayo yayiyi-39% esebenzayo ngakumbi kune-modafinil ekugcineni iimpuku ziphaphile ngaphezulu kwexesha le-4. Yinto ebuthathaka yokufumana kwakhona i-dopamine inhibitor ene-IC50 ye-9 μM, ngokukodwa i-59% ibuthathaka kune-modafinil (IC50 = 3.70 μM) ngaphandle kokuba yi-eugeroic eyomeleleyo, enokubangela ukuba ibe netyala elingaphantsi kwesiyobisi. Ayibonisanga budlelwane be cytochrome P450 2C19, ngokungafaniyo ne modafinil.
IHerrrafinil (9-Fluorenol) Reference
Uphononongo lweearmarm: Eyona Powder yoMgangatho oPhezulu wentengiso ka-2020
I-L-theanine powder (3081-61-6)